Na Delta, Ndị Uweojii Anapụtala Nwaanyị Ndị Ntọ Tọ̀ọ̀rọ̀ dị, Jide Otu Onye So Tọ̀rọ́ Ya - Igbo News | News in Igbo Language
Na Delta, Ndị Uweojii Anapụtala Nwaanyị Ndị Ntọ Tọ̀ọ̀rọ̀ dị, Jide Otu Onye So Tọ̀rọ́ Ya
Ndị ọrụ uweojii na steeti Delta steeti anapụtala otu nwanyị dị afọ iri isii na atọ ndị ntọ tọọrọ ma jidekwa otu onye n'ime ndị ntọ ahụ tọọrọ ya, bụ Davidson Odigho.
Ọ sị na ọ bụ n'abalị iri atọ nke ọnwa Nọvemba ka ha nwetara ozi site n'aka onye ọgbaatùmtùm banyere ụmụnwoke abụọ jigasị mma we nwụchie ma jide otu nwaanyị bụ onye obodo Ughelli na mpaghara okporoụzọ ebe dara òwù dị n'akụkụ obodo Irri-Aviara, ma bụrụkwa ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ntọ.
Ọ gara n'ihu kọwaa na ka ha nwetachara ozi ahụ, onye ji ọkwa DPO mpaghara Oleh, bụ SP Paul Oboware kpọkọtara ndị ọrụ ya ngwangwa, wee duru ha na ndị nche obodo Irri, wee gbochie ma gbaa ọhịa dị ebe ahụ gburugburu. Ngwangwa ndị ntọ ahụ hụrụ ha, ha gbahapụrụ onye ahụ ha tọọrọ, wee gbabà n'ime ọhịa.
N'okwu nke ya banyere ihe ahụ, Kọmishọna ndị uweojii na steeti ahụ, bụ CP Ari Muhammed Ali nyere onye DPO ahụ ntụziaka ka ọ hụ na a nwụ̀chiri ndị ntọ ahụ ngwangwa.